IBC 2017 မော်ကွန်းတိုက် | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » Tag Archives: IBC 2017
TVU ကွန်ယက် IBC 2017 မှာ Show ကိုဆုချီးမြှင့်၏ NewBay မီဒီယာအကောင်းဆုံးဆွတ်ခူး
TVU ကွန်ယက်, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ IP ကိုဗီဒီယိုကဖြေရှင်းချက်အတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနည်းပညာနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုခေါင်းဆောင်သည် 2017 IBC Show မှာပြီးခဲ့သည့်လကတင်ပြခဲ့သည်, Show ကိုဆုချီးမြှင့်တဲ့ NewBay မီဒီယာအကောင်းဆုံးများ၏လက်ခံရရှိသူဖြစ်ပါတယ်။ ဝေးလံခေါင်ဖျားနေရာများတွင်ထံမှချိတ်ဆက်ပစ္စည်းတွေရန်, လုံခြုံစိတ်ချနှင့်မြန်နှုန်းမြင့်အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုကိုထောက်ပံ့ပေးရာ - TVU ကွန်ယက်က၎င်း၏အသစ်က TVU Router ဖြေရှင်းချက်များအတွက် TVBEurope တစ်ဦးထံမှဆုချီးမြှင့်ခဲ့သည်။ ...
IBC 2017 မှာသစ်ကို dual-mode ကို Linux / Android တီဗွီအတွေ့အကြုံကိုရှေ့ဆောင်အမိုင်နိုနှင့် Nordija ပွဲဦးထွက်
အမိုင်နိုသည်အိုင်ပီ / တိမ်တိုက်ကဗီဒီယို software နှင့် device ကိုအထူးကုများနှင့် Nordija, အဆင့်မြင့်သောအကြောင်းအရာများကိုပေးပို့ဖြေရှင်းချက်၏ပံ့ပိုးပေး, IBC 2017 မှာချောမွေ့စွာပေးအန်းဒရွိုက်နှင့် Linux-based တီဗီပေးပို့တို့အကြားရွှေ့ဖို့အော်ပရေတာဖွတစ်ခုထူးခြားဆန်းသစ်သော dual-mode ကိုပလက်ဖောင်းတခုအဖြစ်ပါလိမ့်မယ် တစ်တသမတ်တည်း, ပြည်နယ်၏-Art အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကို။ အသစ်ဖြေရှင်းချက် Nordija ရဲ့နောက်ဆုံးထုတ် FokusOn 4.0 middleware နှင့်အမိုင်နိုရဲ့ Kamai ပေါင်းစပ် ...
ဘူလ်ဂေးရီးယား Sat ဘော်လကန်ကိုဖြတ်ပြီးအရည်အသွေးမြင့် UHDTV enable လုပ်ဖို့ Ericsson ကရွေးချယ်
ဘူလ်ဂေးရီးယား Sat, ဘော်လကန်ထဲမှာခေါင်းဆောင်အကြောင်းအရာပံ့ပိုးပေးတဒေသတွင်းမှာဖြတ်ပြီးတီဗီစာရင်းသွင်းသူမီဒီယာအပြောင်းအလဲနဲ့နျ Standard အဓိပ္ပာယ် (SD) မကယ်မလွှတ်ကူညီပေးပါမည်သည့်ဟာ့ဒ်ဝဲ, High Definition (HD) နဲ့ 4K channel များကိုကယ်လွှတ်ခြင်းငှါ Ericsson ကရွေးခဲ့သည်။ သဘောတူညီချက်၏တစိတ်တဒေသအဖြစ်, Ericsson ကဘူလ်ဂေးရီးယား Sat, Bulsatcom, 4000 အမြင့်တစ်ဦး Affiliate ရန်၎င်း၏ AVP 56 စနစ်ကကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာများကယ်နှုတ်တော်မူပါလိမ့်မယ် ...
Ericsson က MediaFirst အကြောင်းအရာထုတ်ယူခြင်းထုတ်ဖော်ပြသ
Ericsson က (NASDAQ: Eric) IBC 2017 (ပြခန်း # 1.D61) မှာ, MediaFirst အကြောင်းအရာထုတ်ယူခြင်း, စက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့ပထမဆုံး software ကို-based, Multi-လျှောက်လွှာပလက်ဖောင်းကိုဖွင့်ပါလိမ့်မယ်။ ပလက်ဖောင်းအပြည့်အဝစွမ်းဆောင်ရည်ကဗီဒီယိုအပြောင်းအလဲနဲ့စွမ်းရည်အထူးအလှူငွေစျေးကွက်များအတွက်, အရည်အသွေးမြင့်မားအတူတက်မြေပြင်ကနေဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ Ericsson က MediaFirst အကြောင်းအရာထုတ်ယူခြင်း သာ. ကြီးမြတ်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်, သာလွန်အနိမ့်အောင်းနေချိန်နှင့်အပြောင်းအလဲနဲ့ repurpose နိုင်စွမ်းများအတွက်ကြီးထွားလာစက်မှုလုပ်ငန်းလိုအပ်ကြောင်းဖွကွေား ...
Ericsson က (NASDAQ: Eric) IBC 2017 (ပြခန်း # 1.D61) မှာ, MediaFirst အကြောင်းအရာထုတ်ယူခြင်း, စက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့ပထမဆုံး software ကိုအခြေခံသည့်, Multi-လျှောက်လွှာပလက်ဖောင်းကိုဖွင့်ပါလိမ့်မယ်။ ပလက်ဖောင်းအပြည့်အဝစွမ်းဆောင်ရည်ကဗီဒီယိုအပြောင်းအလဲနဲ့စွမ်းရည်အထူးအလှူငွေစျေးကွက်များအတွက်, အရည်အသွေးမြင့်မားအတူတက်မြေပြင်ကနေဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ Ericsson က MediaFirst အကြောင်းအရာထုတ်ယူခြင်း သာ. ကြီးမြတ်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်, သာလွန်အနိမ့်အောင်းနေချိန်နှင့် repurpose နိုင်စွမ်းများအတွက်ကြီးထွားလာစက်မှုလုပ်ငန်းလိုအပ်ကြောင်းဖွကွေား ...
Telestream နဲ့ IBM Aspera ရီးရဲလ်အချိန်အဝေးမှတိုက်ရိုက်ဗီဒီယိုရိုက်ကူးခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှုအနီး Enable
Telestream နဲ့ IBM Aspera Lightspeed တိုက်ရိုက်နှင့်အတူရီးရဲလ်အချိန်အဝေးမှတိုက်ရိုက်ဗီဒီယိုရိုက်ကူးခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှု Vantage အနီး Enable Aspera စွမ်းအားဖြင့်ဖမ်းယူအရည်အသွေးမြင့်စံအိုင်ပီကွန်ရက်များအမ်စတာဒမ်ကျော်အနီးကို real-time တည်းဖြတ်ရေးနှင့်ထုတ်လုပ်မှုများအတွက်ဝေးလံခေါင်သီထုတ်လုပ်မှုသင်းမှ streaming ဖွ - 14 စက်တင်ဘာလ 2017: IBM က (NYSE: IBM က) နှင့် Telestream IBC 2017 မှာယနေ့မြန်နှုန်းမြင့်ဖမ်းယူများအတွက်ဂိမ်း-ပြောင်းလဲနေတဲ့ဖြေရှင်းချက်ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းနှင့် ...
GeoGuard Shield ကိုကုန်ပစ္စည်း Suite ဖယ်ရှားရေး Geo-ပင်လယ်ဓားပြခြိမ်းခြောက်မှု၏ IBC Launch
GeoGuard, ထိုပထဝီခိုးကူးကြိုတင်ကာကွယ်ရေးကျွမ်းကျင်သူများ, ယနေ့ပြုလုပ် (M14 23) ရပ်ကုမ္ပဏီရဲ့ပွဲဦးထွက် IBC အပေါ် GeoGuard Shield ကိုထုတ်ကုန်အစုစုကိုဖွင့်ဖို့ကြောင်းကြေညာခဲ့သည်။ အဆိုပါ GeoGuard Shield ကိုထုတ်ကုန် suite ကို VPN များသည်, proxy များ, Smart DNS ကို proxy များ, tor node များ, အကောင့်အာဏာသိမ်းမှု, ယုံကြည်စိတ်ချရသော stuffing နှင့်ပိုပြီးသုံးပြီးတဆင့် enabled ပထဝီပင်လယ်ဓားပြတိုက်ခိုက်မှုဆန့်ကျင်မီဒီယာပိုင်ရှင်များနှင့်ဖြန့်ဖြူးကာကွယ်ပေးသည်။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာက်ဘ်ညွှန်းကိန်းသုတေသနကွောငျးဖျောပွသ ...